Ọ bụrụ na ị na ike gwụrụ nke na-akpọ ngwaahịa ROM gị gam akporo ngwaọrụ wee na, na ịnụ ọkụ n'obi na-enweta ihe dị iche iche ma ọ bụ ọbụna mee ka omenala ntọala, mgbe ahụ, ọ bụ ezigbo oge na-a ịmalite na ịmatakwu banyere Android omenala ROMs. Omenala Android ROMs nwere ike inye gị ọzọ nnwere onwe na-enye gị mmelite dị ka Android 5.0 maka na agadi ngwaọrụ nke agaghị enweta OTA (N'ime Air) si manufactures. Cheta na: Mụta izugbe okwunkowa nke Android okwu tupu ka zere nsogbu mgbe flash a omenala Android ROM.
Anyị mere ole na ole researches banyere ụfọdụ Android omenala ROMs na-amasị ịkọrọ isi atụmatụ ha na ị, na olileanya ọ pụrụ inyere gị aka ịhọrọ gị mkpa Android omenala ROMs.
CyanogenMod bụ n'ezie otu n'ime ndị kasị ewu ewu Android omenala ROMs gburugburu ụwa, ọ na-enye tọn oké atụmatụ dị ka nkwado maka OpenVPN, nkwado maka downloadable gburugburu na ndị ọzọ nzuzo ngwaọrụ. Ọ bụ nnọọ omenala ROM na-akwado ọtụtụ ngwaọrụ na nwere 12 nde nọ n'ọrụ installs on a ìgwè nke ngwaọrụ dị ka ọnụ ọgụgụ na June 2014. Cheta na: Lelee akwado ngwaọrụ maka CyanogenMod ebe a.
MIUI bụ ihe Android omenala ROM mepụtara site na Xiaomi Tech na China ma metụtara nanị akụkụ ụfọdụ maka otutu nke mba na-asụ asụsụ na-enyemaka nke Fans. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ahaziri, mara na ngwa ngwa ROMs, na awade ike isiokwu nkwado, mara mma ngwaahịa ngwa, customizable lockscreens zuru ezu mgbọrọgwụ ohere. Cheta na: Lelee akwado ngwaọrụ maka MIUI ebe a.
Paranoid Android bụ omenala ROM aiming ịgbatị usoro, na-arụ ọrụ na ime ndị ugbua ẹdude mma nke Android na-eso iwu mere site Google. Ọ na-eme Google ngwaahịa ROM ọzọ mara mma, ma mkpa ka ị na-enweta ya onwe gị iji chọpụta ya mma. Cheta na: Lelee akwado ukara na ketara ngwaọrụ maka paranoid ebe a na ebe a.
The Android Open Kang Project ROM bụ nnọọ ihe a ọhụrụ ahụ bịaranụ tụnyere ọtụtụ ogologo adị ROMs dị ka CyangenMod, na ọtụtụ ndị hie ụzọ weere ya dị ka CyangenMod na ha mbụ n'anya, ma n'ezie na ọ akwụ elu akara na tinye-ons na ngwá ọrụ dị ka omenala toggles, Ikanam njikwa na navigation mgbanaka nke CyangenMod enweghị. Ọ bụ ngwa ngwa, mụ na-agba ọsọ na 3.5 nde ngwaọrụ dị ka ọnụ ọgụgụ na Sept 2013. Cheta na: Lelee akwado ngwaọrụ maka AOKP ebe a.
5. ebughibu ICS
Aha ebughibu ROM ama agwa gị ihe ị kasị mkpa atụmatụ ya nwere. Ọ bụ ibu mkpa na fechaa echichi nke na-elekwasị anya trimming na-enweghị isi atụmatụ na-enye gị a dị ọcha ma na ngwa ngwa gburugburu ebe obibi. Ma, ọ bụ naanị na-akwado ole na ole Samsung ngwaọrụ n'ihi na e nwere nanị otu Mmepụta n'azụ ya. IHE: Lelee akwado ngwaọrụ maka ebughibu ICS ebe a.
6. Liquid Ezigbo
Liquid Ezigbo bụ otu n'ime ndị kasị omenala ICS ROMs nke bụ ọbụna ngwa ngwa karịa na ngwaahịa awụnyere na Samsung Nexus. Ọ na-obere ma mma, doo ọzọ ohere maka gị ngwa ọdịnala na ọbụna nwere isiokwu nkwado otú i nwere ike hazie ya. Ọ bụrụ na-eji ire ụtọ ime ihe dị niile ị chọrọ na ngwaọrụ gị na-akwado, ị nwere ike a na-agbalị. Cheta na: Lelee akwado ngwaọrụ maka Liquid Ezigbo ke ukara Forum.
Dị nnọọ ka Shakespeare si, e nwere otu puku ntà na otu puku ndị mmadụ n'anya, n'ihi ya, ihe ị na-eche? Biko ịkọrọ gị echiche banyere ọkacha mmasị gị Android omenala ROMs.